May Tower - Myanmar Builders Guide
Wednesday, 20 July 2016 17:00	May Tower
May Tower အမှတ် ၁၄၄/အေ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဆောက်နေသည့် ရုံးခန်းအဆောက်အဦးဖြစ်ပါသည်။
ထိုအဆောက်အဦးသည် Ocean Emerald Pearl Group (OEPG) ၏ မူလရုံးခန်း OEPG office tower 1 ဘေးတွင် ကပ်လျက် တည်ဆောက်နေကာ မူလက OEPG office tower2ဟု ခေါ်ဝေါ်ရာမှ May Tower အမည်ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆောက်အဦးသည် ၈ထပ်ခွဲ ဖြစ်ပြီး ကြမ်းခင်းဧရိယာ စုစုပေါင်း ၂၀၀၀၀ စတုရန်းပေ နီးပါးရှိကာ OEPG မှပင် တည်ဆောက်လျှက်ရှိသည်။ စီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်တွင် ပြီးစီးမည်ဟု ဆိုသည်။ ပထမအလွှာကြမ်းခင်းဧရိယာ ၂,၃၅၆ စတုရန်းပေ၊ ဒုတိယအလွှာနှင့် တတိယအလွှာ ကြမ်းခင်းဧရိယာ ၂,၆၉၉ စတုရန်းပေ၊ လေးလွှာနှင့်ငါးလွှာ ကြမ်းခင်းဧရိယာ ၂,၁၆၅ စတုရန်းပေနှင့် ခြောက်လွှာ နှင့် ခုနစ်လွှာ ကြမ်းခင်းဧရိယာ ၂,၅၈၄.၇၉ စတုရန်းပေ ရှိပြီး စုစုပေါင်း ရုံးခန်းကြမ်းခင်းဧရိယာ ၁၈,၃၃၄ စတုရန်းပေ ရှိပါသည်။
ရုံးခန်း၏အပေါ်ဆုံးတွင် ၁,၂၂၃ စတုရန်းပေ ရှိတဲ့ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ penthouse ပါဝင်ပါသည်။
ရုံးခန်းတစ်ခုချင်းစီကို အင်တာနက် cable တပ်ဆင်ပေးထားပြီး စိတ်ချရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ လည်း ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားအဆောင်အယောင်များအနေဖြင့် ကျယ်ဝန်းပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ညီလာခံ ၃ ခု ပါဝင်မည်ဟု သိရသည်။ မီးစက်လည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်လှေကားအပါအ၀င် PA စနစ်လည်း ပါပြီး အရေးပေါ် alarm များလည်း တပ်ဆင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရုံအစည်းအဝေးခန်းမတိုင်းကိုလည်း ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမတွေ စတဲ့ ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
OEPG contact: 01 555 645, 01 555 262
This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from OEPG website.
Read 1230 times	Rate this item
« M Tower	Pyi Nyein Thu Office Tower »
Sule SquareSule Square Mall & Offices စီမံကိန်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်းနဲ့ အနော်ရထာလမ်းထောင့် မှာ တည်ဆောက်နေသည့် ရုံးခန်း တာဝါ နဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ UPG Office TowerUPG Office Tower သည် နာမည်ကြီး သင်္ဘောဆေး ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် United Paint Group မှ တည်ဆောက်မည့် ရုံးခန်း အဆောက်အဦး ဖြစ်ပါသည်။
Pyi Nyein Thu Office TowerPyi Nyein Thu Office Tower is an office tower under construction at 39/A, Pyay Road in Manyangone township which is on the upper region of Yangon city.
Mandalay Wholesale Marketမန္တလေး လက်ကားဈေးကြီး (Mandalay Wholesale Market) ကို မန္တလေးမြို့၏ ဗဟို ချက်ဆုံဆုံရာ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ပလိပ်စကားအင်းဝိုင်းလမ်း၊ မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းဟောင်းတွင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်သည်။
M TowerM Tower အထပ်မြင့် ရုံးခန်း အဆောက်အဦးသည် အမှတ် ၅၂၇ ပြည်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် လှည်းတန်းစင်တာ နှင့် အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADG Bank) ကြားတွင် တည်ဆောက်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။